Anthony Martial, Donny van de Beek oo hakiyay qorshihii ay kaga tagi lahaayeen Manchester United. | laacibfm.com
Home Laacib Anthony Martial, Donny van de Beek oo hakiyay qorshihii ay kaga tagi...
Anthony Martial, Donny van de Beek oo hakiyay qorshihii ay kaga tagi lahaayeen Manchester United.
Anthony Martial iyo Donny van de Beek ayaa lagu soo waramayaa inay labadooduba hakad galiyeen qorshahooda ka bixitaanka Manchester United ka dib markii Ole Gunnar Solskjaer laga ceyriyay shaqada tababaranimo.
Martial iyo Van de Beek labaduba waxay ku dhibtooday inay si joogta ah u ciyaaraan intii uu joogay Solskjaer xilli ciyaareedkan, labada ciyaaryahan ayaa si xoogan loola xiriirinayaa inay ka tagayaan Old Trafford.
Si kastaba ha ahaatee, labada ciyaaryahan ayaa loo magacaabay shaxda ugu horeysay ee Champions League Talaadadii, iyadoo Red Devils ay iska xaadirisay booskooda wareega 16ka iyagoo 2-0 kaga badiyay Villarreal.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , Martial iyo Van de Beek ayaa haatan diyaar u ah inay dib u dhigaan go’aan kasta oo ku saabsan mustaqbalkooda inta ay kooxdu raadinayso tababare ku meel gaar ah.
Dean Henderson , Eric Bailly , Alex Telles iyo Diogo Dalot ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay diyaar u yihiin inay arkaan waxa kooxda ka dhacaya toddobaadyada soo socda ka hor inta aysan go’aan ka gaarin mustaqbalkooda.
Previous articleBorussia Dortmund oo dooneysa inay qandaraas cusub ka saxiixato Erling Braut Haaland
Next articleDaafaca Chelsea Ben Chilwell oo u badan tahay inuu seego inta ka dhiman xilli ciyaareedka
Kulamadii shanaad ee heerka Group-yada tartanka Champions League ayaa soo dhamaaday, waxaana boosaskooda diyaarsaday inta badan kooxaha hase yeeshee waxa la sugayaa in...